Nosoratan'ny adala hovakin'ny imbeciles ... | Martech Zone
Nosoratan'ny adala hovakin'ny imbeciles…
Alakamisy, Desambra 21, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Andriamatoa Rago, mpanampy amin'ny famoahana editor editor ao amin'ny The Wall Street Journal, mahomby adiresy ny tontolon'ny bilaogy toy ny:
The Blog Mob: Nosoratan'ny adala hovakin'ny imbeciles.
Mety ity ny fanafihana miharihary sy be voninahitra indrindra hitako tamin'ny matihanina amin'ny Gazety! Amin'ny maha matihanina amin'ny gazety taloha ahy dia tena mahakivy ny mahita an'io fihetsika io. Mbola ratsy kokoa aza, mpankafy ny Wall Street Journal aho. Raha tokony handray ny gazety "superhighway information" ny gazety dia mihevitra fa tokony hotehirizina ho toy ny "làlan'ny fampahalalam-baovao"… ary lalana "lalana tokana" amin'izany.
Andriamatoa Rago, azafady azafady fa tsy voafehinao intsony ny famaritana, ny sivana ary ny fanovana vaovao alohan'ny 'avela' handevona azy. Miala tsiny aho fa tsy ampy ny voambolana sy ny fahaizan'ny fitsipi-pitenenana ataon'ny olona mitovy volo aminao. Angamba misy ifandraisany amin'ny hevitry ny hafa ny hevitrao ny vokatra:
Na ity… Technorati raha ampitahaina:
Andriamatoa Rago, mety te-hijery an'ity adala ity ianao… manintona imbeciles vitsivitsy izy (zorony ambany ankavanana):
Manantena ny hampitaha ny mpamaky amin'ny taona ho avy aho… raha eo akaiky eo ianao. Tsy mino aho fa ho tonga ianao.
RSS = Avereno ny sendika tsotra? Avoahy amin'ny Internet ny Resume-nao
Dec 27, 2006 amin'ny 3: 23 AM
Misy adala foana izay mihevitra fa hainy daholo ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa tsy manana saina hanoratra lahatsoratra mendrika izy amin'ny voalohany… hey ity misy eritreritra…mety manahy izy sao hisy bilaogera tsara kokoa (Doug) ho avy hanala ny asany? 8)